ရှငျသနျနခြေိနျမှာ လိပျပွာလုံခငျြတယျ – Shinyoon
ရှငျသနျနခြေိနျမှာ အနညျးဆုံးတော့ လိပျပွာလုံခငျြတယျ အဲ့တာကွောငျ့ ဘယျသူ့အပျေါမှာမှ မယုတျမာဘူး
စိတျထားကောငျးကောငျးထားတယျ မတနျတဲ့လူက အခြိနျတနျရငျ ထှကျသှားကွမှာပဲ အဓိကက ကိုယျ့ဘကျက မတ်ေတာမပကျြဖို့ပဲ လိုတာပါ ကိုယျ့စကားတဈခှနျးကွောငျ့ သူတဈပါးကို မထိခိုကျစဘေူး ကိုယျ့လမျးကိုယျပဲ လြှောကျတယျ အမွငျ့ရောကျဖို့ တဈခုတညျးအတှကျ တဈခွားသူတှရေဲ့ဘ၀ကို နငျးမသှားတတျဘူး
ဘ၀မှာ ကိုယျ့သမိုငျးကိုယျ ရေးနကွေတဲ့လူတှခေညျြးပါပဲ မသခေငျကတညျးက နာမညျသနေတောမြိုး နာမညျပကျြနတောမြိုး မဖွဈခငျြဘူးအခြိနျတနျလို့ လကျပွနှုတျဆကျကွရတယျဆိုရငျတောငျ ကိုယျ့ဘကျက လိပျပွာသနျ့သနျ့နဲ့ပဲ ကနျြခဲ့ခငျြတယျ နောငျတတှလေဲ မလိုခငျြဘူး လှမျးဆှတျနရေတာတှကေောပဲ တဈနတေ့ဈခြိနျ ပွနျပွီးဆုံခဲ့ရငျတောငျ ကိုယျဘကျက အလှဆုံးပွနျပွုံးပွနိုငျတဲ့အထိ လိပျပွာလုံခငျြတယျ
တဈဘ၀စံရမှာထကျ နောကျထပျဘ၀တှမြေားစှာခံရမှာကို ကွိုပွီး တှေးကွောကျပါတယျ ကိုယျစားတဲ့ ဟငျးတှေ ကောငျးခငျြမှ ကောငျးမယျ အသားဟငျးတဈခှကျပါဖို့ မလိုဘူး သူတဈပါးမကျြရညျစကျတှေ မပါတဲ့ ထမငျးဝိုငျးက အလိုလို အာဟာရ ဖွဈပါတယျ အိပျမကျလှလှမကျဖို့အတှကျလဲ အိပျယာ​အကောငျးစားကွီးမလိုပါဘူး စိတျသနျ့သနျ့နဲ့ အိပျရငျ ဖြာပျေါပဲဖွဈဖွဈ ကွမျးခငျးပျေါပဲဖွဈဖွဈ အိပျမကျလှလှမကျပါတယျ
လောဘ ရှိတယျ ဒါပမေယျ့ အစှနျးမရောကျစရေဘူးဒေါသရှိတယျ အနောကျမှာ နောငျတတှေ မရှိစရေဘူး လောက . . . ကံဇာတျဆရာအလိုကြ ကပွနရေပမေယျ့ ကိုယျ့သမိုငျးကိုယျလှဖို့တော့ ကိုယျနဲ့ပဲ ဆိုငျပါတယျ ။
ရှင်သန်နေချိန်မှာ အနည်းဆုံးတော့ လိပ်ပြာလုံချင်တယ် အဲ့တာကြောင့် ဘယ်သူ့အပေါ်မှာမှ မယုတ်မာဘူး
စိတ်ထားကောင်းကောင်းထားတယ် မတန်တဲ့လူက အချိန်တန်ရင် ထွက်သွားကြမှာပဲ အဓိကက ကိုယ့်ဘက်က မေတ္တာမပျက်ဖို့ပဲ လိုတာပါ ကိုယ့်စကားတစ်ခွန်းကြောင့် သူတစ်ပါးကို မထိခိုက်စေဘူး ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ပဲ လျှောက်တယ် အမြင့်ရောက်ဖို့ တစ်ခုတည်းအတွက် တစ်ခြားသူတွေရဲ့ဘ၀ကို နင်းမသွားတတ်ဘူး
ဘ၀မှာ ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ် ရေးနေကြတဲ့လူတွေချည်းပါပဲ မသေခင်ကတည်းက နာမည်သေနေတာမျိုး နာမည်ပျက်နေတာမျိုး မဖြစ်ချင်ဘူးအချိန်တန်လို့ လက်ပြနှုတ်ဆက်ကြရတယ်ဆိုရင်တောင် ကိုယ့်ဘက်က လိပ်ပြာသန့်သန့်နဲ့ပဲ ကျန်ခဲ့ချင်တယ် နောင်တတွေလဲ မလိုချင်ဘူး လွမ်းဆွတ်နေရတာတွေကောပဲ တစ်နေ့တစ်ချိန် ပြန်ပြီးဆုံခဲ့ရင်တောင် ကိုယ်ဘက်က အလှဆုံးပြန်ပြုံးပြနိုင်တဲ့အထိ လိပ်ပြာလုံချင်တယ်
တစ်ဘ၀စံရမှာထက် နောက်ထပ်ဘ၀တွေများစွာခံရမှာကို ကြိုပြီး တွေးကြောက်ပါတယ် ကိုယ်စားတဲ့ ဟင်းတွေ ကောင်းချင်မှ ကောင်းမယ် အသားဟင်းတစ်ခွက်ပါဖို့ မလိုဘူး သူတစ်ပါးမျက်ရည်စက်တွေ မပါတဲ့ ထမင်းဝိုင်းက အလိုလို အာဟာရ ဖြစ်ပါတယ် အိပ်မက်လှလှမက်ဖို့အတွက်လဲ အိပ်ယာ​အကောင်းစားကြီးမလိုပါဘူး စိတ်သန့်သန့်နဲ့ အိပ်ရင် ဖျာပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကြမ်းခင်းပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ် အိပ်မက်လှလှမက်ပါတယ်
လောဘ ရှိတယ် ဒါပေမယ့် အစွန်းမရောက်စေရဘူးဒေါသရှိတယ် အနောက်မှာ နောင်တတွေ မရှိစေရဘူး လောက . . . ကံဇာတ်ဆရာအလိုကျ ကပြနေရပေမယ့် ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ်လှဖို့တော့ ကိုယ်နဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ် ။